Al-Ghazaali - Wikipedia
Al-Ghazaali (1058-1111) waa Abuu xaamid Muxamed bin Muxamed bin Muxamed bin Axmed Al-gazaali Alduusi Alnisaabuuri, (Carabi: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي النيسابوري الفقيه الصوفي الشافعي ) waa faqiih suufi shaafici ah, kaas oo lagu naaneysi jiray (xujada Islaamka بحجة الإسلام)
'Abu Hamed Mohammed pesar-e (ebn-e) Mohammed wuxuu dhashay 1058 dhintayna 1111,wuxuu ahaa khabiir beershin ah kuna xeel dheer diinta islaamka. Ghazali wuxuu caan ku ahaa magacyo badan. qoroyaasha Muslim ka ah waxay isticmaali jireen, Abu Hamed taas oo ka dhigan ina Hamed si aan loogu khaldin walaalkiisi caanka ahaa Axhmad Ghazali. isaga magaciisuna wuxuu ahaa moxamed laakiin wuxuu caan ku ahaa algasaali ama algazel. wuxuu ku dhashay sanadkii 1058 magaalada Tus ee gobolka Khorasan,ee dalkii Bershia Eegana loo yaqaano Iran. wuxuu ku dhigtay aqoontiisa aasaasiga ah magaalada Tus ka dibna wuxuu u safray Gurgan oo kutaala bada kaspianka si uu usii wato wax barashadiisa xaga axkaamta. Qiyaastii sanadki 1077 ayuu Ghazali u guuray Nishapur halkaas oo uu ka bilaay barashada cilmiga diimaha oo uu xiisaynayay.
Sida la rumaysan yahay kobtaasi waa kobtii uu kula kulmay filosoferkii waynaa ahaa ee la odhan jiray al-Juwani isaga ayaana la sheegaa inuu ku dhaliyay inuu barto cilmiga filosofiyada. Isla sanadkaas ayuuna Juwanis dhintay, ka dibna al-Ghazali wuxuu horyaal u noqday kaalin muhiim ahna ka gajiray ardadii Nizam al-Mulks wuxuuna noqday cilmi baadhe taas oo sababtay inu bare sare ama professor ka noqdo jaamacadii nizaamiya ee Baqdaad ku taalay sanadki 1091.Inuu alqasaali caam ka noqday yurub waxaa sabab u ahaa shaqdii hufnay ee u ka qabtay si si fudud loogu helo doodo ku saabsan cil´miga diimaha ama teologi iyo in doodihii dimaha kusaabsanaa ee oo ka qaýb gali jiray si fudud looga helay yurub.
Al qasaali wuxuu ka dooday kana soo horjeeday miisaankii giriigu wax ku misaami jireen (hellenistis) fikirkiisu wuxuu saamayn wayn ku yeeshay Avicenna (d.1037) qaar badan oo ka mid ah. Ghazali doodiisii ayuu sii waday isagoo isku dhex wada ama isku xidhaya cilimiga diimaha iyo filosoofiyada.
Alqasaali buugiisii The Inconsistency of the Philosophers, oo afka hooyona ka dhiganta burburkii ama kala daadashadii filosoofiyada, (Tahāfut al-Falāsifaʰ), carabigama تهافت الفلاسفة, wuxuu kaga soo horjeedsaday nyplatonismada. Ghazali ma ahayn mid diidanaa gabi,ahaanba miisaankii labaad ee hellenism, balse wuxuu aad wax uga qoray Aristoteles' gabogabadii caqligalnimada (syllogism). Ghazali doodiisii waxay xitaa aad uga saraysay mufakarkii waynaa Al-Ash’ari-mufakarkaasi oo isticmaali jiray ama soo daliiliyay mu’tazilitism iyo taariikhda carabta Ibn Khaldun ayaa yidhi al-Ghazali wuxuu ahaa qoflii ugu horeeyay ee wax ka qoro cilimiga diimaha casriga ah teologi.
Al Ghazali wuxuu ogaaday in cilmiga diimaha teologiga iyo filosofiga xadigooda. Figrada iyo shaqada ee dadka kale ood raacdo kuguma hogaaminayso udhawaanshaha ilaahay ayuu qabay laakiin adigu waa inaad camal wanaagsan oo alle raali ka yahay qabtaa si aad ehlu khayr u noqoto. wuxuu qaatay suufiyada, hawshii cilmiga diimaha figradihii iyo doodihiina wuu yareeyay wuxuuna qabay kan jidka toosan haysta waa kan ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya. ma aha inuu cilmiga diimaha iyo sheekhnimadii uu qasaali gabi aanba iska dhaafay balse xiligaas suufiyadu waxay ahayd qayb ka mid ah dhaqanka suniga ah. cilmiga Teologin iyo sunnada lagu qeexay shareecada islaamka. Ghazali wuxuu qabay in suufiyada runta ah ay yihiin kuwo la aamini karo oo run ah waxayna haystaan sunnadi dhabta ahayd.
Al qasaali wuxuu sii waaday shaqadisii wax qorida xitaa markii uu noqday ama uu ku biiray madhabta suufiyada ee soomalidu u taqaano qadiriyada,ama shaaficiyada laakiin shaki yar ayaa ku jira in uu qoraaladiisa tirada badan uu isagu wada qoray iyo in kale maxaayeelay aad ayay ugu yareed wadamada bariga Aasiya kuyaala in loo nisbeeyo mufakar ama qoraal aad cajiib u ah sida alqasaali in qoraaladiisa markuu dhinto ka dib. waxaan uhibeeyay qoraalkan umada somaliyed guud ahaan.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Al-Ghazali.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Ghazaali&oldid=141811"
Last edited on 28 May 2015, at 11:11
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 11:11.